Alexis Sanchez Oo Shaaca Ka Qaaday In Lionel Messi Uu Si Adag Ugu Ilmeeyay Guuldaradii Barcelona Kaga Soo Gaadhay Kooxda Chelsea Tartanka UEFA Champions League-ga Sanadii 2012. – GOOL24.NET
Alexis Sanchez Oo Shaaca Ka Qaaday In Lionel Messi Uu Si Adag Ugu Ilmeeyay Guuldaradii Barcelona Kaga Soo Gaadhay Kooxda Chelsea Tartanka UEFA Champions League-ga Sanadii 2012.
Weeraryahanka reer Chile iyo kooxda Manchester United Alexis Sanchez ayaa shaaca ka qaaday in hada kahor uu laacibka Barcelona ee Lionel Messi uu u ilmeeyay sababa la xidhiidha tartanka Champions League-ga.
29 jirkan kooxda Manchester United ayaa wuxuu qeyb ka mid ah waayihiisa kubada cagta kaga soo garab ciyaaray xidiga reer Argantina Lionel Messi kooxda Bracelona wuxuuna laacibka reer Chile sheegay inuu daawaday sanadii 2012 saaxiibkiis hore ee Lionel Messi oo si xoogan ugu ooyay kulankii Champions League-ga ay kula ciyaareen kooxda reer England ee Chelsea.
Alexis Sanchez ayaa wuxuu marti ku noqday barnaamijka xidigii hore kooxda Asenal Thierry Henry ahna falaqeeyaha shabakada caanka ah ee “Sky Sports”, waxaana barnaamijkan loogaga hadlay xaalada iyo cadaadiska xiddigaha kubada cagta.
Sanchez ayaana ka hadlay: “Waxaan u maleenayaa in kubada cagta ay wax badan siineyso ciyaartoyda, laakiin dadku inta badan ma arkaan intaas iyo in kabada oo dhibaato ah in laacibka uu kaga qaato noloshiisa kubada cagta gaar ahaan meelaha ka baxsan kaamirooyinka”.
Xidiga kooxda Manchester United ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray: “Dhibaatooyinka waxaa ka mid ah in mararka qaarkood aadan arkin qoyskaaga, ama inaadan ka qeyb galin xaflada dhalasho ee hooyada ama caruurtaada”.
Alexis Sanchez ayaa wuxuu hadalkiisa kusoo xidhay: “Qolka labiska kooxda Barcelona gaar ahaan sanadii 2012, kadib guuldarii aan kala kulanay kooxda Chelsea kulankii semi-final-ga Champions League-ga, Lionel Messi wuxuu u ooyay si adag sababa la xidhiidha inuu qasaariyay rogadhadii uu garsoorka ku abaal mariyay kulankan”.